ကျွန်ုပ်နှင့် Valentine Day | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Cultures » ကျွန်ုပ်နှင့် Valentine Day	36
ကျွန်ုပ်နှင့် Valentine Day
Posted by Ma Ma on Feb 17, 2015 in Cultures, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 36 comments
အပိုကြီးနဲ့ Valentine Day ဘာမှမပတ်သက်ပဲနဲ့
ဘာများလျှာရှည်ချင်နေသလဲလို့ အပြစ်တင် မစောပါနဲ့။ ဘယ်အချိန်ကပေါ်ပေါက်လာမှန်းမသိတဲ့…..
လူငယ်ပိုင်းတွေကို အတော့်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့……
Valentine Day ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့ဆိုတာကို ကြားဖူးနားဝတော့ မှတ်သားထားမိတယ်။ အခါကြီးရက်ကြီးလည်း မဟုတ် ပိတ်ရက်လည်း မဟုတ်တော့ မှတ်မှတ်ရရလည်း မရှိပါဘူး။
ထုံးစံအတိုင်း မနက်စောစောအလုပ်ကို ထွက်လာတယ်။
အလုပ်ထဲရောက်တော့ အလုပ်ဆင်းတဲ့သူနည်းနေလို့ မေးကြည့်မှ…..
လူငယ်လေးတွေ တော်တော်များများ Valentine Day ဆင်နွှဲဖို့ သွားကြသတဲ့။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရရင် ဒီနေ့တော့ဖြင့် ပင်ပန်းအုံးမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ ကျွန်ုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ Valentine Day ဟာ ကျွန်ုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်လာပါတော့တယ်။ ဖြစ်လာမှတော့ မတတ်နိုင်ဘူး နေ့လည်စာနောက်ကျခံနိုင်အောင် မနက်စာအဆာပြေစားထားမှလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
( ဤကားဆင်ခြေ) ဒါနဲ့ပဲ ကလေးတစ်ယောက်ကို အနားကဆိုင်မှာ မနက်စာအဆာပြေ ထမင်းကြော်သွားမှာခိုင်းတော့ Valentine Day မို့ ဆိုင်မထွက်ပါဘူးတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ Valentine Day ဘရိတ်ဖတ်က အသင့်စားခေါက်ဆွဲပြုတ်ဆိုတာ အမှတ်တရပေ့ါ။ နေ့လည်ပိုင်းရောက်တော့ အိမ်ဘေးကဆိုင်လေးမှာ ယိုစုံသွားဝယ်စားမယ်ဆိုပြီး သွားတော့……
တနှစ်ပတ်လုံး စနေ တနင်္ဂနွေတောင်မပိတ်ပဲ အလုပ်ကြိုးစားကြတဲ့ အဲဒီဆိုင်က ညီအမတွေလည်း Valentine Day အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ မနေ့ကညနေကတည်းက ဆိုင်ပိတ်သွားကြသတဲ့။
အော် …..Valentine Day ဆိုတာ ဒီလောက်တောင် ထူးခြားထွတ်မြတ်တဲ့ နေ့ပါလား လို့ မှတ်ချက်ချမိတယ်။ ဒီနေ့တော့ အလုပ်မလာတဲ့သူများလို့ အလုပ်ရှုပ်ပြီး ပင်ပန်းတော့မှာပဲလို့ ထင်နေမိပေမယ့်…
တကယ့်တကယ်ကျတော့ တနေ့လုံး ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဈေးဝယ်သူက မလာ။
ဟယ် ဒီနေ့တနေ့လုံး အရောင်းအ၀ယ်အေးလိုက်တာ လို့ ငြီးငြူ မိတော့
ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့သူက အ ရန်ကောဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့အတူ ပြောလိုက်တာက….
ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းချင်ရင် နှင်းဆီပန်းနဲ့ ချောကလက် ရောင်းရတယ် ဟဲ့။
လို့ ဟောက်တာ ခံရပြန်ပါရောလား။ ပြောရင်းဆိုရင်းမှာပဲ နယ်ကပစ္စည်းပို့တဲ့ မအေးဆီက ဖုံးဝင်လာတယ်။
မအေး “မမ ရေ မနက်ဖြန်ကျရင် ပို့ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖိုးတွေ မောင်လေးကို လာယူခိုင်းချင်လို့ ကြိုဆက်လိုက်တာ”
ကျမ “မအေးရေ- ဘယ်နေ့က ပို့ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖိုးကို ရှင်းခိုင်းမှာလဲ။ ဒီအပတ်ပို့ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖိုးတွေ မနေ့ကပဲ သားတော်မောင် လာရှင်းသွားတယ်လေ။”
မအေး “အမလေးးးး ကုန်ပါပြီ မမ ရယ်။
သားက Valentine Day လျှောက်လည်ဖို့ ပိုက်ဆံ တောင်းနေတာ၊
အဲဒါ မပေးလိုက်လို့ ပစ္စည်းဖိုးတွေ လာထုတ်သွားတာဖြစ်မယ်။
ခုလည်း ဖုံးဆက်မရလို့ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်းမသိရဘူး။
ဒုက္ခပါပဲ မမ ရယ်။ ”
အော်…….ကျွန်ုပ်နှင့် Valentine Day ကား ဤသို့သာတည်းးးးး About Ma Ma
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဗယ်လင်တိုင်းဒေးက စနေနေ့ …
.သောကြာနေ့ညနေက ကျုပ် သူများဆီကအားမနာလျှာမကျိုးယူစီးနေတဲ့ ရွှေငါးလေးကို
.ကျုပ်ရှေ့မှာ အသက်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင် ကောင်လေးသုံးယောက်
.စီတီမတ်က ချောကလက်လေးတွေကိုယ်စီကိုင်လို့ ….
.စမ်းချောင်းလမ်းမှာ ကားတွေပိတ်နေလို့ တဖြေးဖြေးသွားရတော့ လမ်းလျှောက်နှုံးက ညီနေသပေါ့….
.သူတို့ချင်းပြောတာတွေ ကျုပ်ကြားနေရတာပေါ့ ….
.အဲဒီစကားတွေကို သူတို့ကောင်မလေးတွေကြားရင် လဲတောင်သေမလားပဲ ….
ခင်ဇော် says: Let me guess…..
Aboutasession at Hotel??
Eating Bau and Samosa??
padonmar says: ဒီနှစ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ရာပြည့်က လွှမ်းမိုးထားတော့ ဗယ်လင်တိုင်းအသံ နည်းနည်း တိုးသွားသလိုပဲ။
ကိုယ်အနားပတ်ဝန်းကျင်က အပျိုကြီးတွေ များလို့လည်း မသိတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
kai says: ပြောလို့သာပြောတာ.. အမတော်ရေ..
ဗယ်လင်တိုင်းနေ့က.. ဗယ်လင်တိုင်းအော်ရီဂျင်နယ်နိုင်ငံတွေနဲ့..အနောက်တိုင်းသားတွေထက်များ.. မြန်မာတွေပိုသည်းသည်းလှုပ်နေသလား… လို့..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ဈေးဆိုင်တွေ.. အရောင်းရပိုကောင်းအောင်.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တာပဲ.. ထူးထူးခြားခြားပိုတွေ့မိတယ်..။
တကယ်တော့ဗယ်လင်တိုင်းနေ့မှာ ချစ်သူရည်းစားထက်.. မိခင်ဖခင်..(အထူးသဖြင့် မိခင်)ကိုလည်း.. လက်ဆောင်ပေးကြပါသဗျ..။
အဲလိုပဲ.. အလုပ်တွေအလုပ်တွေဖြစ်အောင်.. အဖြစ်တွေအဖြစ်တွေ.. ပွဲတွေပွဲတွေများများဖန်တီးပေးမှ.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းပေါ်မှာမို့.. တိုင်းပြည်လည်းချမ်းသာ..
လူတွေလည်းအလုပ်ရှုပ်သမို့.. တခြားစိတ်မ၀င်စား.. ကောင်းတဲ့ဓလေ့ပါ..။
သခင်အောင်ဆန်းရာပြည့်စည်ကားတာကိုတော့.. ကြိုက်သဗျ..။ နိမိတ်ပဲ..။ ကောင်းတဲ့နမိတ်ပဲ..။
သခင်အောင်ဆန်းသမီးက.. ပါတီထောင်ထားပြီး..ငုတ်တုတ်ရှိနေတော့ကာ.. ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ..မဲနဲ့ပွဲ ပြတ်ပြီလို့.. ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဗယ်လင်တိုင်းနေ့က ချစ်ခင်သူ မိသားစု မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဆိုလိုတယ်လို့ ကြားဖူးပေမယ့်…
ဒီမှာတော့ အဲဒီအနှစ်သာရတွေ မတွေ့ရဘူး။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဒီမှာတော့ စနေနေ့ ဆိုတော့ ရုံးပိတ်ရက်လဲ ဖြစ်နေတော့ကာ ရထားပေါ် ကားပေါ် လမ်းပေါ် မှာတွေ ပန်းစည်းနဲ့ အရုပ်လေးတွေနဲ့ အဝတ်အစား လှလှလေးတွေနဲ့ ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေ များသကိုး။
ဒါပေမယ့် ဆိုင်တွေလဲ မပိတ်ဘူး။ ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှလဲ မနားဘူး။ (အရင်နှစ်တွေတုန်းက ခွင့်လဲ မယူကြဘူး ထင်တယ်)။
ဒီထက်ပိုပြီး လူသွားများ (အတွဲတွေ) တဲ့ နေရာတွေမှာ ပန်းစည်းလေးတွေ ချော့ကလက်လေးတွေ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေတောင် တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ :D :D :D
မြစပဲရိုး says: ချစ်မမ
ပထမဆုံး သိလိုတာက ဘီးကလေးစီး နေကြတာ ဘူသူ တွေတုန်း။
၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ပွင့်လင်းလာစ ဗယ်လင်တိုင်းကြတာ သူငယ်ချင်း စစ်စစ် တွေ နဲ့ပါ။
ဒီတော့ ကြိုက်တဲ့သူ နဲ့ ချောကလက် ဖလှယ်လို့ ရပါတယ်လေ။ သို့ပေသည့် ဗယ်လင်တိုင်း အတွက် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်တာတော့ ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာဘဲ ရှိမယ်ထင်ရဲ့။
အံ့ရော။ ကိုပါ – မပြောကာမှ သိချင်နေရော။ ဘာတွေ ပြောတာတုန်း။
Ma Ma says: ပို့စ်ကို ပျင်းစရာမကောင်းအောင် ပုံထည့်ချင်လို့ ဂူဂယ်မှာ ရှာလိုက်တာ။
အဲဒီပုံတွေ့တော့ ရွာ့ဆည်းလည်း ခိုင်ဇာနဲ့တောင် တူသလိုလိုရှိတယ်ထင်ပြီး သဘောကျလို့ ထည့်လိုက်တာ။
မလတ်ရေ- ကိုပါမပြောတာကို မှန်းကြည့်လိုက်တာ။
တခါတလေမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေချည်း ပြောကြတဲ့ စကားတွေက အားမနာ လျှာမကျိုး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒါဆို ရှေ့က နင်းနေတဲ့ တစ်ယောက် ကိုလဲ တစ်ယောက်ယောက် နဲ့ တူပေးလိုက်ကြစို့လား။
ဘူသူ နဲ့တူလဲ ဟေ့။
ဒီတော့ ကာယကံရှင် ဒေါ်ဇီဇီ က စကြည့်ပြီး ဘူ နဲ့ တူလဲ အဆိုပြုပါ။
ကျုပ်မျက်စိထဲ မတော့ ဟို တစ်ယောက် ဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: .ဟုတ်တယ်အရီး….ဟိုတစ်ယောက်မှ…ဟိုတစ်ယောက်ပဲ… (၀င်ညှော်သည်….)
Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .ကျုပ်ကတော့ ခိုင်ဇာနဲ့ တူတယ်မထင်…အံစရာနဲ့ မွန်မွန် ပဲ .မမ ရေးတာ အမှန်ပဲဗျ…ကျုပ်လည်း စနေနေ့က ရုံးတက်ရတယ်
.စက်ရုံမှာလည်း ၀န်ထမ်းတချို့ ခွင့်ယူကြသဗျ…အံ့ဘွယ်
.ဦးပါရေ…လူချင်းတွေ့မှကျုပ်ကိုတိုးတိုးပြောပြနော Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .ပုံကိုသေချာပြန်ကျိမှ ကိုမတ် နဲ့ ခင်ဇော် ပါလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ရှေ့ က နင်းတဲ့သူက လာဝန်မခံသေးတော့ ဘယ်သူ့နောက်လိုက်ရမှန်းမသိသေးဘူးး
Mr. MarGa says: Valentine’s day လား
မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: .ဗယ်လင်တိုင်းဒေးလဲ တခြားရက်တွေလို ၂၄နာရီပဲရှိတာပါပဲ… သတ်မှတ်လို့သာ ဖြစ်လာတာရယ်….
.အဲ့နေ့ကတော့ ဆင်တူလေးတွေနဲ့ စုံတွဲလေးတွေတော့ မြင်တယ်…..။ ဘယ်အတွဲလေးကတော့ ချစ်စရာလေးပေါ့…လိုက်ကြည့်….။ Shopping Mall တွေမှာ Promotion တွေတော့လုပ်မလားမသိ….။
.မင်းလူရဲ့ အော်ဆွေးတစ်အုပ်တော့ ပြီးသွားတာ မှတ်မှတ်ရရ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: အွန်လိုင်းလေတပ် ဗိုလ်ဂြုပ်ကျီး ရဲမိုး၏အမျိုး တီမားမားအား ဆန့်ကျင့်ဂျ….
Ma Ma says: ဂေဇက်ရေးတတ်မှုးဂျီး ဗိုလ်ကြောင်ကြီးအား ၀ိုင်းဆော်ကြ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: Omg…
M I that slim and who can carry me with the bicycle???
Shwe Ei says: -Valentine day မှာတွဲစရာ ယဲဇား မရှိတာကို…ဆယ်ကျော်သက်ခလေးတွေ စိတ်ထဲမှာ -မျက်နှာငယ်စရာလိုလို..ရှက်စရာလိုလို ခံစားရတယ်ဆိုရင်…အိုက်ဂလို ဆင်တူဝတ်ပီး သဲသဲလှုပ်ပြကြတဲ့ -စုံတွဲတွေမှာ တာဝန်မကင်းဘူး..
– အရေးမပါတဲ့ကိတ်စတွေကို…ဘုမသိ ဘမသိ အဟုတ်ထင်တတ်တဲ့အရွယ်တွေရှေ့ မှာ -အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖောဖောသီသီ လုပ်ပြနေတာ..ဦးနှောက်ရှိတဲ့ လူဂျီးဒေဖစ်နေတာ -အံ့အောစရာဘဲ …
Ma Ma says: အခုခေတ်က ရွှေအိပြောသလိုပဲ ဖြစ်နေပြီ။
လူလူသူသူဖြစ်အောင် ရဲဇားလေး တစ်ယောက်လောက်တော့ ရှိမှဆိုသလို။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2278
Ma Ei says: …ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းချင်ရင် နှင်းဆီပန်းနဲ့ ချောကလက် ရောင်းရတယ် ဟဲ့။…
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပန်းအလှဆိုင်မှာများ တစ်ပါတ်လောက်ကြိုတင်ပြီး အရုပ်တွေ ချောကလက်တွေနဲ့ ပန်းတွေပြင်ရတာ ၀န်ထမ်း ၅ ယောက် အဆောင်မပြန်နိုင် ဆိုင်မှာညအိပ် ပြင်ရတာရယ်…ရောင်းကောင်းချက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဟုတ်ပ့ါ မအိရေ။
အရင်က မြို့ပေါ်က ပညာတတ်လူငယ်လူတန်းစားလောက်ပဲ ဆင်နွှဲကြတယ်လို့ ထင်ထားတာ။
ခုတော့ တောရောမြို့ပါ လှည်းနေလှေအောင်းမြင်းစောင်းမကျန် သိကြဆင်နွှဲကြလို့ အံ့သြမိတာ။
အလင်းဆက် says: v day
.အေးတာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ဒီနှစ်ထူးခြားတာဆိုလို့ korea wave တွေ ရိုက်လို့ထင်ရဲ့ အိမ်မှာ ကျောင်းလာတက်တဲ့ မောင်ဝမ်းကွဲတယောက် ( သူက ကင်းဆိုပဲ သူ့ကျောင်းမှာ )ကို သူကန်နေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲထိ စပျစ်သီး အစိမ်းရယ် အမဲရယ် အော်ဂဲနစ်ချောကလက်တဗူးရယ် ကောင်မလေးက ဘယ်သူ့မှ မကျွေးပါနဲ့ ဆိုပြီး လာပေးတယ် တဲ့
ခြင်းတောင်း ပန်းရောင်ခြယ်လေးကလည်း လှလိုက်တာမှ အာ့နဲ့ လိုချင်ယူဆိုပြီး ပေးတာနဲ့ ထည့်ချင်တာ ထည့်ဖို့ဆိုပြီး ယူလိုက်တယ် စပျစ်သီးကလည်း စားမနိုင်မှာ စိုးလို့ ကူစားပေးလိုက်တယ်
ချောကလက်ကလည်း ကောင်းတော့ မြည်းရင်း လက်လွန်သွားတယ် ဟီး စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး တလက်စထဲ စိတ်ပူမိတာက ၁ နှစ်ကျော် သာသာရှိသေးတဲ့ တူမ ပိစိကို ဘယ်လိုထိန်းရမှာပါလိမ့်ဆိုပြီး
စားရင်းနင်တာ ငါ့တူမသာဆိုရင်ဆိုပြီး :((((
သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုလည်း ကျူတာပေါက်စဆရာမချောချောလေးက ချစ်တယ် ဖွင့်ပြောသတဲ့
ဟိုက ငြင်းတော့ ပြောရက်တယ် နော် အကိုပြောရက်တယ်နော်ဆိုပြီး ငိုသတဲ့
ခေတ်ရေစီးကို တားမရမှတော့ ကိုယ့်သွေးသားတွေ အသိအပြည့် ဆင်ခြင်ဥာဏ်အပြည့်ထည့်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ
Ma Ma says: မယ်ပုလည်း အော်မေ့ဂိုဏ်းကို မျက်စောင်းထိုးနေတယ်ပေ့ါလေ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: အဲနေ့တုံးကတော့ ဘယ်ကောင်မလေးကျိ ကျိ အရုပ်ကြီးတွေဖက်ထားတဲ့သူနဲ့ ပန်းစည်းနဲ့ချောကလက်ဗူးကြီးတွေ ကိုင်ထားတဲ့သူနဲ့ အို စုံလို့ စုံလို့…ဘယ်နေရာသွားသွားလဲ အတွဲဒွေဂျီးပဲ
ဟီး အားကျသလို ၊ အားမကျ သလို…
ဒါပေမယ့် အမှန်က အဲနေ့ဂ စိန့်ဗယ်လင်တိုင်း သေတဲ့နေ့နော်….
Ma Ma says: အဲလိုပေးမယ့်သူမရှိရင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်တောင် မထွက်ဝံ့စရာ။ သူများ ဗယ်လင်တိုင်းလို့ လိုက်ပြီး ဗယ်လင်တိုင်းကြတာ။
စိန့်ဗယ်လင်တိုင်း သေတဲ့နေ့ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်လည်းမသိဘူး။
သိကြတဲ့သူလည်း နည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1383
King says: အဲ့နေ့ကြီးက တစ်နှစ်မှ ကံမကောင်းဘူးးးးးး :'(
Mr. MarGa says: ဟိုက်ရှ်
ဘယ်နားက ပြန်ပေါ်လာသလဲ ဘုရင်ကြီး
King says: ဟီးးးး
ကိုးကန့်နဲ့ စစ်တပ် ပစ်လို့
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါဗျ ….. :D
Ma Ma says: ဟုတ်ပ့ါ မောင်ကင်း ပြန်ပေါ်လာလို့ အံ့သြ၀မ်းသာဖြစ်မိပါရဲ့။ ကဲ ရွာထဲမှာ ဓာတ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးပေးရမလား၊
ကုန်ပါပြီ အဲ ကုမ္ပဏီကို ရှယ်ယာဝင်ရမလား ဒါရိုက်တာကြီး။ Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ရည်းစားဘ၀တစ်လျှောက်လည်း အဝေးမှာကျောင်းတက် အဝေးမှာ တာဝန်ကျနေတာချည့်မို့
Ma Ma says: .ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ကို မသိချင်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ သိကြားမင်းနဲ့ လက်လက်ဆင် တို့ ၂ယောက်တွဲပြီး .ဆင်နွဲကြပါလား။
.(ဟို ၃ ယောက်လို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်)
.နတို့က သန့်သန့်လေးဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ လျှောက်လည်ဖို့ ပြောတာ။ .နန်းတော်ရာသူရေ-
.ဟိုတုန်းက မတိုင်း လိုက်ရတာကို ခုမှ ပြန်တိုင်းကြပေ့ါ။
.(အဲ့နေ့မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ကို အဖိုးအဖွားတွေကို တာဝန်ပေးထားလိုက်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အဲ့နေ့က စပိုင်ဝိုင်ဝယ်လာလို့ နှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်တစ်ဝက်သောက်လိုက်ကြသေးတယ် ကလေးတွေမမြင်အောင်ဖွက်ပြီး
ဟိုသကြားတို့ လက်လက်ဆင်တို့နဲ့တော့မလွှတ်ပါနဲ့အန်တီမမ ဆေးကျောင်းသားတွေက အရိုးငြမ်း၃ဖွဲ့ဆိုပြီး လိုက်ဖမ်းနေမှ
Crystalline says: စက်ဘီးနောက်ကတျောက်က နန်းဆုကေဆွမ်နဲ့တူတယ်.. :)). ဒီမှာတော့
Valentine’s Day ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့မိသလိုပဲ… ချောကလက်လည်းမစားရ..ကျွေးသူမရှိ..
ထူးခြားတာက အသက်၈၀နားနီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဦးရီးတော်ကို… သူကူညီပေးလိုက်တဲ့ မိသားစုတစ်စုက လက်ဆောင်..
စာအိတ်..ပန်းစည်းနဲ့လာနှုတ်ဆက်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (ထူးခြားတာက အသက်၈၀နားနီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဦးရီးတော်ကို… သူကူညီပေးလိုက်တဲ့ မိသားစုတစ်စုက လက်ဆောင်..
အနှစ်သာရရှိရှိ ဆင်နွှဲတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.